Nutrition – Page9– Healthy Life Journal
ကလေး ထမင်းသိပ်မစားဘူး . . .
မေး။ ။ ကလေးအသက် ၁၀ လရှိပြီ။ ထမင်းသိပ်မစားဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဘာအားဆေးတိုက်ရမလဲဆရာ။ ဝေဝေစန်း(FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ ကလေးကို အတတ်နိုင်ဆုံး မလိုအပ်ဘဲနဲ့ အားဆေးတိုက်တာ မကောင်းပါ။ ပုံမှန်ဖွံဖြိုးမှု ရှိ၊ မရှိ နီး...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မေး ။ ကျွန်မသားလေးက ၁၀လပါ။ နေ့တိုင်း ဥနီနဲ့ ကြက်သားနဲ့ပြုတ်ပြီး ကြိုချက်လေးကျွေးနေတာပါ။ အဲဒါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိလားရှင်။ ဖြေ ။ ဥနီသိပ်များရင် မကောင်းပါ။ အရေပြားအရောင် ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ မေး ။ သမီးက...
ဇီဝကမ္မဖြစ်ပျက်မှုအားကောင်းစေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေမည့် အစာ ၁၀
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်တာ၊ အိပ်ရေးဝ၀ အိပ်စက်အနားယူတာနဲ့ ရေများများ သောက်တာတွေက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို မြင့်တက်စေတဲ့ အကောင်းဆုံးနည်း သုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အောက်ပါအစာတွေက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို အားကောင်းစေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းနိုင်တဲ့ အစာတွေ...
တစ်နေ့ ငှက်ပျောသီးနှစ်လုံးစားရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမှာလဲ . .
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တစ်နေ့မှာ ငှက်ပျောသီးနှစ်လုံးစားပေးရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကို သိသိသာသာ ကောင်းမွန်စေတယ်လို့ လေ့လာမှုအရသိရပါတယ်။ (၁) သွေးဖိအားကို ပုံမှန်ဖြစ်စေပါတယ် ငှက်ပျောသီးက သွေးတိုးတာကို လျော့ကျစေပြီး သွေးဖိအားကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ထိန်းပေးပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးမှာ ပိုတက်စီယမ် ၄၂၀ မီလီဂရမ်ဝန်းကျင်...
တိုဟူးမှာ ဘယ်လို ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ပါဝင်သလဲ . . .
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တိုဟူးဟာ ပရိုတင်းဓာတ်အပြည့်ပါတဲ့ သစ်သီးကိတ်တွေနဲ့တူပါတယ်။ ပဲပိစပ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ တိုဟူးမှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးရှိတဲ့ အာဟာရဓာတ်များစွာပါဝင်တာကြောင့် အောက်ပါ ကျန်း မာရေးကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိစေပါတယ်။ – သက်သတ်လွတ်စားသူများကို ပရိုတင်းဓာတ် ပြည့်ဝစေခြင်း ပရိုတင်းဓာတ်အပြည့်အဝပါတဲ့တိုဟူးကို...
တစ်နေ့ ကြက်ဥသုံးလုံးစားရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ဘာဖြစ်လာမှာလဲ . . .
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကြက်ဥပြုတ်တစ်လုံးမှာ ၈၅ကယ်လိုရီပါပြီး ပရိုတင်းဓာတ် ၇ ဂရမ်ပါဝင်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်ချိန်မှာ ကြက်ဥကို တစ်နေ့သုံးလုံးစားတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ အောက်ပါပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (၁) ကိုယ်ခံအားစနစ် ကောင်းမွန်လာပါမယ် ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကို သဘဝကျကျ တွန်းလှန်ချင်ရင်...
သွေးကင်ဆာကုသနေစဉ် စားသင့်သည့် အစားအသောက်
မေး ။ သွေးကင်ဆာကုသနေချိန်မှာ ဘယ်လို အစားအစာတွေကို စားပေးသင့်ပါသလဲရှင်။ နီလာ၊ မန္တလေး။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသည်။ ဖြေ ။ သွေးကင်ဆာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုကင်ဆာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ကင်ဆာဖြစ်နေချိန်မှာ အစာအာဟာရကို မျှတအောင် စားသောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ တချို့က ကင်ဆာဖြစ်နေရင်...
လူနာနှင့် လူနာရှင်တို့၏ အစားအသောက်ဆိုင်ရာအယူအဆမှားများ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတွေမှာ လူနာတွေဟာ အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အယူအဆမှားတွေ ရှိနေ တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အယူအဆမှား (၁) အသားစားရင် သန်ထတယ် ဒါက မဟုတ်ပါဘူး။ အသားစားရင် ပရိုတင်းဓာတ်ကို ရရှိစေပါတယ်။ အယူအဆမှား (၂)...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မျှတတဲ့ အာဟာရ (Balance Diet) ကို စားပေးရပါမယ်။ ဆီကို လုံးဝဖြတ်ဖို့မလိုပါဘူး။ အဓိက ပြည့်ဝဆီကိုပဲ လျှော့ရပါမယ်။ မပြည့်ဝဆီကို စားရပါမယ်။ သစ်သီးဝလံတွေက ကင်ဆာဖြစ်နှုန်းကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက ကင်ဆာဖြစ်နှုန်းကို လျော့ကျစေပါတယ်။ အချိုရည်တွေကိုရှောင်ရပါမယ်။...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မေး. နွေကာလမှာ ရင်အေးအောင် ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကို အဓိကစားပေးသင့်ပါသလဲ။ ဖြေ. နွေရာသီမှာ ရင်အေးအောင် အရည်ရွှမ်းတဲ့အသီးအနှံတွေကို များများစားပေးရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် စပျစ်သီး၊ ဖရဲသီး၊ ပန်းသီး၊ သခွားမွှေးသီးတို့လို အရည်ရွှမ်းပြီးအေးမြတဲ့ သစ်သီးတွေကို စားပေးရပါမယ်။ ဒါဆို...